Indlwana yeNgcuka 🌻 kajongilanga - I-Airbnb
Indlwana yeNgcuka 🌻 kajongilanga
Wilków, Swietokrzyskie, Poland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMagdalena
Simema ngobubele bonke abo baxabisa uxolo nenzolo nabathanda ukuba ngaphandle. Kukho indawo eninzi ekhululekileyo ejikeleze izindlu kunye nembono emangalisayo yehlathi kunye ne-Łysica. Yindawo efanelekileyo kunye nephupha kubantu abafuna ukuphumla esifubeni sendalo, ukumamela i-rustle yemithi, iikonsathi zeentaka okanye ukukhwaza kwamasele.
Sinezindlu zamaplanga eziqatywe mhlophe ezihlala iminyaka emithathu yonke. Indlu nganye inegama layo - iLavender, iRose, iJongilanga.
Amaqhugwane ahlotshiswe kwisitayela selizwe kunye ne-idyllic yangaphakathi. Izindlu zakhiwe ngendlela efana nefama yelali. Zinomgangatho ophantsi kunye nokufudumeza okuphakathi. Kukho indawo yokupaka kwizakhiwo, indawo yokuhlala yesidlo enendawo yebarbecue kunye nebhonfire, indawo yokudlala, ijim yangaphandle, ibhola yevoli kunye neenkundla ze-badminton.
Yindawo efanelekileyo kunye nephupha kubantu abafuna ukuphumla esifubeni sendalo, ukumamela i-rustle yemithi, iikonsathi zeentaka okanye ukukhwaza kwamasele. Kuyinyani ukuba iintaba ze-Świętokrzyskie zezona ntaba ziphantsi zasePoland, kodwa ezona zindala, kwaye inani leentsomi ngekhilomitha nganye lelona liphezulu ePoland.
Nceda uqhagamshelane nam ngokubhala. Isenokuba ngumyalezo obhaliweyo okanye i-imeyile.